Mozambika: Fanafihana Kandida Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2017 18:59 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Swahili, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, Français, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jiona 2009 ity)
Namaly ny fanafihana nahazo ilay mpanao politika Daviz Simango, tao avaratry ny tanàna seranan-tsambo Mozambikana, Nacala ireo bilaogera Mozambikàna Carlos Serra [pt] sy Paulo Granjo [pt]. Ankoatra ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny tontolon'ny bilaogy, nisioka momba ny fanafihana ny antokon'i Simango (@mdmwiki).
Ben'ny tanànan'i Beira i Simango, ary nanorina ny antokony vaovao MDM tamin'ny fiandohan'ity taona ity, rehefa niaraka tamin'ny antokon'ny mpanohitra nentim-paharazana RENAMO. Vao andro vitsy lasa izay, nanamafy ny fikasan'izy ireo handray anjara amin'ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana Oktobra sy hanao fampielezan-kevitra izy sy ny antokony. Nitarika ny fivorian'ny antokony i Simango no nisy olona tao anatin'ny vahoaka nitifitra azy izay naka ny fitaovam-piadian'ny polisy.
Tsy naratra izy saingy nilaza ny fampahalalam-baovao fa nisy olona telo naratra, ka polisy ny iray. Nilaza ny tatitra voalohany avy amin'ny fampahalalam-baovao Mozambikàna tsy miankina fa mpikambana ao amin'ny RENAMO no nitifitra.